DG Jubbaland ayaa ku dhawaaqday in keliya Shirka Muqdisho ay uga qaybgeli karto haddii lagu qabanayo Xerada Xalane oo saldhig u ah Wakiilada Beesha Caalamka, kadib markii ay cabsi ka muujisay go’aankii Ciidamada Dowladda Federaalka ay ku weerareen Musharixiinta gaar ahaan labadii Hogaamiye ee ka horreysay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Wasiirka Warfaafinta DG Jubbaland Cabdi xuseen Sheekh Maxamed oo la hadlay VOA ayaa sheegay in wixii ka dhacay Muqdisho 19-kii Febaraayo 2021 ay ku ridday kalsooni beel, waxaana uu si cad u sheegay in ay ku qanacsan yihiin in la helo gacan saddexaad oo ka baxsan dhinacyada heshiiska saxiixaya.
Beesha Caalamka ayuu ka dalbaday in ay dusha saarato mas’uuliyadda la socodka heshiiska, dhaqangalkiisa & kor joogteyntiisa, maadaama Dowladda Federaalka ay toos u bartilmaameedsatay madax kala duwan oo xilal kasoo qabtay Dalka sida uu hadalka u dhigay.
“Wixii dhacay 19-kii Febaraayo waxa ay beertay xaalad kale, taasi dhibaato weyn oo dhacday ayay ahayd, diyaar ayaan u nahay ka qaybgalka Shirka balse waxaan dooneynaa goob amnigeedu sugan tahay, mar haddii la weeraray Musharixiinta la iskuma haleyn karo Dowladda, haddii aan la hureyn waxaan door-bideynaa Xerada Xalane oo saldhig u ah Wakiilada Beesha Caalamka” Sidaasi waxaa yiri Wasiirka Warfaafinta DG Jubbaland.
Madaxtooyada Soomaalya ayaa shalay soo saartay Warsaxaafadeed ay ku dalbaneyso in Hogaamiyayaasha DG Juntland & Puntland in ay kusoo biiraan shirka looga hadlayo ka gudubka caqabadaha hortaagan Doorashooyinka oo keliya u baahan in la saxiixo, maadaama wakiilo ka kala socday Federaalka, Dowlad Goboleedyada & Gobolka Banaadir Baydhabo ku saxiixeen.